China Low Iron U Profa Girazi / U Channel Girazi Isimba reGeneral System fekitori nevagadziri | Yongyu
Yakadzika yesimbi U mbiri girazi simba girazi rekugadzira girazi zvekuvakisa (UBIPV) kusanganisa zvakanakira U mbiri yekuvaka girazi uye neyakagadziriswa simba rekugadzira magetsi kusimudzira zvakasvibirira kuchengetedza kwezvakatipoteredza uye simba-kuponesa uye emission kuderedza. UBIPV neguta zvinogona kusangana zvakabatana kuita kuti Photovoltaic ive chikamu chehupenyu hwevanhu. Haisi chete iyo iri yekuvakira zvinhu, asi inogonesawo kuwana simba-rekuchengetedza magetsi uye zvinangwa zvinopa simba, uye inogona zvakare kusikwa pamwe ne LED chidzitiro maseru, electrochromic girazi, uye nehungwaru control system. Kuziva kukosha kwegirini yakawedzerwa uye yakakwira kukosha-yakawedzerwa kwezvivakwa uye kugadzirisa huwandu hwakazara hwezvivakwa, UBIPV ndiko kutungamira kweruzivo rwezvivakwa zvakasvibirira mune ramangwana.
U profile simba girazi rekugadzira girazi zvekuvakisa (UBIPV) inogona kuunganidzwa kana modularized, izvo zvinobudirira zvinoderedza zvimisikidzo zvakaiswa muzvivakwa uye nemagetsi emagetsi ekugadzira magetsi masisitimu, inoderedza mari yekushandisa uye mari yekuchengetedza vashandi, uye inovandudza kushanda nekushandiswa kwakakwana-kukosha kwezvivakwa. .
(UBIPV) zvivakwa zvepanyama
Simba remuchina: 700-900N / mm2; mushure mekuedza> 1800 N / mm2;
Kuoma kwemohs: 6-7
Modulus ye elasticity: 6000-7000 N / mm2;
Linear yekuwedzera coeffnty (tembiricha inokwira 1 degree Celsius): 75-85 × 10-7;
Chemical kugadzikana: 0.18mg;
Transmittance: akajairika-yakagadzirirwa-yakagadzirirwa dhiza, chena chena imwe mutsara 91%; kuiswa mutsara kaviri 80%;
Kupisa kupisa kuwanda: imwe-mutsara kuisirwa <4.9 W / ㎡ · K, kuiswa-mbiri-mutsara kuisirwa <2.35 W / ㎡ · K, kuiswa-mbiri-dura kuiswa mushure mekushungurudza <2 W / ㎡ · K;
Ruzha rwekuisa izwi kuiswa mutsara kaviri kwakaderedzwa ne 38db; lamoni kuiswa mutsara kaviri kwakaderedzwa kupfuura anopfuura 40db;
Muedzo wekupikisa moto: 0.75h;
U mbiri simba rekugadzira girazi zvekuvakisa zvinhu zvinogona kushandiswa zvakanyanya mukuvaka matenga, kuvaka kunze kwemadziro sound insulation masvingo, smart highway, matenga emapaipi, smart dzimba dzekuchengetera, smart ekumisheni nzvimbo, zvekurima masheti, villa dzimba, madziro edzimba, uye sunrooms
1) Yakasimba simba, chigadzirwa chine yakakwirira masimba masimba uye simba rezvinhu, inokwanisa kutsungirira zvinopfuura 100Kg / m2, haisi nyore kuhurema, uye inopokana nechando kudzvanywa nechimvuramabwe. Zvakafanana nechiteshi simbi simbi, inodzivirira kumanikidzwa nemhepo uye inodzivirira kuputsa kwesero.
2) Hapana chimiro, hapana hurema hwePID. Iyo R-angle dhizaini yegirazi inodzivirira mwenje kuti isavharwe neyechinyakare fenicha, inovandudza iyo Photovoltaic voltage mangwanani nemanheru, uye inowedzera nguva yekushanda yeinator.
3) Inogona kutsikwa-tsikwa, hapana chikonzero chekutenderera chiteshi. Kuisirwa kwechinyakare sosi yemagetsi gadziriro yemagetsi inoda kuchengetedza kuongorora pamwe nekuchengetedza nzira. U-yakamisirwa simba rekugadzira girazi rekuvakisa zvinhu zvinogona kukwira zvakananga kuisirwa nekugadziriswa, izvo zvinowedzera huwandu hwakaisirwa panzvimbo yeyunivhesiti ne50% uchienzaniswa neyakajairwa nzvimbo mamiriro.
4) Kuumbwa kwemvura isina mvura. Iko kwepakutanga kurongeka kwekudzivirira mvura kunoenderera zvakare kudzikisa mutengo wekugadzirisa uye hakudi hukuru hukuru-disassembly uye kugadzirisa. Mushure-kwekugadziriswa kwekutengesa kuri nyore uye nekukurumidza.
5) Nayo yakasimbiswa mbabvu chimiro, hapana simbi simbi bhurawuti inodiwa, kuponesa basa uye zvinhu. Mari yakakwana inoenzaniswa nemagirazi echidzitiro chekatoni.
6) Kudzoka kwekudyara kwakakwira uye kamuri yekusikwa yakakura. U-yakamisirwa simba-inogadzira girazi zvigadzirwa zvekuvaka zvinogona kushandiswa zvakananga sekunze zvivakwa zvekudzivirira, zvakaita sedenga, zvivakwa zvekuisa uye madziro ekunze. Imwe-nguva yekudyara, mari kubva kune simba rekugadzira makore anopfuura makumi matatu.
7) Kuzvishambidza. Neruzivo rwepamberi rwekuzvichenesa, rinogona kubvisa guruva kweanosvika makore gumi, richideredza mari yekuchengeta zuva nezuva.
8) Yakachengeteka mhando uye yakareba masherufu hupenyu. Iyo system ine makore mashanu waranti uye zvikamu zvacho zvine gumi-gore waranti. Guarantee 90% yakaganhurirwa simba mukati memakore gumi uye 80% yakaiswa simba mukati memakore makumi maviri neshanu.
9) Kutarisa kure. Tenzi mamiriro ekushanda ees solar system munguva chaiyo.
10) Yake yemamoni kuumbwa, yakakwirira kugadzirwa kurongeka.
Yepfuura: Yakadzvanywa & Ceramic Frit & Yakashatirwa-Yakadzika-E U Girazi / U Channel Girazi
Inotevera: Yakakwira Performance U Mbiri Girazi / U Channel Girazi System
U Mbiri Girazi
U Mbiri Girazi 2019
U Profa Girazi Etching
Yakakwira Performance U Girazi / U Channel Glas ...